Wararka Maanta: Sabti, July 31, 2021-Gudoomiyihii gudiga doorashooyinka Gobolka Sool oo la diley
Sabti, Luulyo, 31, 2021 (HOL) - Wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in Guddoomiyihii komishinka Doorashooyinka Somaliland ee gobolka Sool Cabdillaahi Laba- go'le aay dabley hubaysan goordhawayd ku dileen Laascaanood.
Dabley hubaysan oo aan haybtooda ilaa hada la aqoonsan ayaa diley gudoomiyihii Gudiga Doorashooyinka Gobolka Sool Cabdilaahi Laba-go'le xili uu gurigiisa gelaayey sida ay dad degaankaa ka ag dhowaa HOL u sheegeen.
Illaa hada ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga waxaasi muuqanayay ciidanka Booliska oo goob kasta taagan iyadoo dad aad u tiro badanina ay isu soo bexeen.
Wixii war ah ee ka soo kordha filo dhowaan.
Seynab A. Warsame , Hiiraan Online